आठ सुरक्षाकर्मी र एक नाबालकको हत्या अभियोगमा काठमाडौंको डिल्लीबजार जेलमा रहेका रेशम चौधरीको पार्टी कैलालीका चार स्थानीय तहमा जित हासिल गर्दै सुदूरपश्चिममा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको छ।
निलम्बित सांसद रेशम चौधरीको पार्टीले कैलालीको टीकापुर क्षेत्रका चार स्थानीय तहमा जित हासिल गरेको छ।
टीकापुर क्षेत्रका तीन स्थानीय तहमा रेशम चौधरीको पार्टीको अग्रता
कैलालीको टीकापुर क्षेत्रका स्थानीय तहमा रेशम चौधरीको पार्टीले अग्रता फराकिलो बनाउँदै लगेको छ।
उपमेयरको अनुभवपछि मेयरमा दाबी पाँच वर्ष उपमेयर भएर अनुभव बटुलेका कैलालीका उपमेयरहरू ३० वैशाखको स्थानीय चुनावमा मेयरको दाबेदार बनेका छन्।
टीकापुरमा रेशम चौधरीको पार्टीले तोक्यो उम्मेदवार, अन्य दलमा २१ दाबेदार स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिंदै जाँदा टीकापुरमा रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तयारी तीव्र पारेको छ भने अन्य दल पनि उम्मेदवार छनोटमा लागेका छन्।
धनगढीमा हमालसँग कसले गर्ला प्रतिस्पर्धा? धनगढीको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी घोषणा गरेर प्रचारमा जुटेका गोपाल हमालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न प्रमुख चार राजनीतिक दलका २० जना नेता टिकटका लागि आन्तरिक लबिङमा लागेका छन्।
गैरथारूमा सिकलसेल एनिमिया, उपचारमा कठिनाई
स्वास्थ्य उन्‍नती चौधरी
पश्चिम तराईमा विशेष गरी थारू समुदायमा देखिएको सिकलसेल एनिमिया पछिल्लो पटक गैरथारूमा पनि देखिन थालेकाे छ।
पत्रकार महिलाका चुनौती: सहकर्मीबाटै दुर्व्यवहार!
२१ वर्षमा पनि मल्हम नलागेकाे मुक्त कमैयाको घाउ
कमैया जीवनबाट मुक्ति पाए पनि २१ वर्षसम्म थातथलोको ठेगान नलागेका पश्चिम तराईका पूर्व कमैयाको कथा-व्यथाले भन्छ- त्यस वेलाको राजतन्त्रदेखि अहिलेका स्थानीय सरकारसम्म कोही आफ्नो भएनन्।
वैदेशिक रोजगारीमा महिला: देश बाहिर पनि दलालकै डर वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, सुदूरपश्चिमबाट मात्र आठ हजार तीन सय २२ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, जसमा तीन सय २५ जना महिला छन्।
सुदूरपश्चिमबाट एमालेका १६९ प्रतिनिधि छनोट नेकपा (एमाले)को १०औं महाधिवेशनका लागि सुदूरपश्चिमबाट १६९ प्रतिनिधि छनोट भएका छन्।